Foreign Currency Account • Abank
Home » Products » Foreign Currency Account
A Bank ၏ International Banking Department မှ အောက်ပါ ၀န်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်၊၊
နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း (Opening Foreign Currency Account)
၁.လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ကနဦး အပ်နှံငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ယူရို၊ စင်ကာပူဒေါ်လာ ငွေကြေး (၁၀၀) ဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်း
Export Section မှ ၀န်ဆောင်မှုများ
၁.ပို့ကုန်ကြိုတင်ငွေပေးချေသောစနစ်အရကြိုတင်ရရှိငွေများအား သက်ဆိုင်ရာ ကုန်ရောင်းသူများ၏ ကုမ္ပဏီစာရင်းသို့ထည့်သွင်း ပေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
၆. ပို့ကုန်ရငွေများအား ကုန်ရောင်းသူ၏ ကုမ္ပဏီစာရင်းသို့ ထည့်သွင်း ပေးခြင်း
၇.သင်္ဘောတင်စာရွက်စာတမ်းများဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုး ကောက်ခံ ပေးခြင်း။
၈.နိုင်ငံခြားဘဏ်များမှထုတ်ယူခြင်းမပြုရသေးသောချက်လက်မှတ် များအား ငွေတောင်းခံပေးခြင်း။
Import Section မှ ၀န်ဆောင်မှုများ
– ချက်ခြင်းငွေပေးချေရမည့် ငွေလွှဲစာတမ်း (Sight LC)
– ဆိုင်းငံ့ငွေလွှဲစာတမ်း (Usance LC)
– လွှဲပြောင်းနိုင်သည့် ငွေလွှဲစာတမ်း (Transferable LC)
၂.သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်း ပြင်ဆင်ပေးခြင်း / ပယ်ဖျက်ပေးခြင်း။
– သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းတန်ဖိုး မြှင့်တင်ပေးခြင်း။
– သင်္ဘောတင်ရက် ပြင်ဆင်ခြင်း။
၅.ပစ္စည်းတင်ပို့ပြီးကြောင်းစာရွက်စာတမ်းများဖြင့် ပေးပို့လာသော ကုန်ပစ္စည်းများအား ငွေပေးချေပေးခြင်း။
၁. Shipping Guarantee
Shipping Guarantee ၀န်ဆောင်မှုဆိုသည်မှာ ကုန်ပစ္စည်း များ ဆိပ်ကမ်းသို့ရောက်ရှိလာသည့်တိုင်အောင် သင်္ဘောတင်စာရွက်စာတမ်းများ အချိန်မီမရောက်လာသည့်အခါ ABank တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းအရ A Bank မှ Shipping Guarantee အဖြစ်ထုတ်ပေးထားသော ၀န်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။
၂. Tender Guarantee
Tender Guarantee အား အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုမှ ၎င်းင်းတို့ လိုအပ်ချက်အရ Tender ခေါ်ယူရာတွင် ၎င်းတို့၏ Tender Invitation Letter ပါ Terms and Conditions များနှင့်အညီတင်ဒါ လျောက်ထားသူသို့ ဘဏ်မှတာဝန်ယူထုတ်ပေးခြင်း။
၃. Performance Guarantee
အစိုးရဌာနများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု လက်တွဲဆောင်ရွက်ရာတွင် ၎င်းင်းတို့အနေဖြင့် လုပ်ငန်းသဘောတူ စာချုပ်ပါအချက်အလက်များအား အချိန်မီပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်စေရန်စာချုပ်တန်ဖိုး ၏ ပမာဏ တစ်ခုအား လုပ်ငန်းလက်ခံသူထံမှPerformance Guarantee ကိုဘဏ်တွင် လျောက်ထားရယူ၍လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ သို့တင်ပြရပါသည်။ ထိုစာချုပ်ပါ အချက်များအား အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်စေရန် ဘဏ်မှ ကိုယ်စား ထုတ်ပေးသော အာမခံအမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။
၄. Advance Payment Guarantee
လုပ်ငန်းအပ်နှံသူထံမှ လုပ်ငန်းလက်ခံသူက ကြိုတင်ငွေရယူ လိုပါလျှင် ဘဏ်တွင် Advance Payment Guarantee လျောက်ထားရပါသည်။ကြိုတင်ငွေရယူထားပြီး၎င်းင်းတို့ စာချုပ်ပါ အချက်များအား အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် စေရန် ဘဏ်မှကိုယ်စား ထုတ်ပေးသော အာမခံအမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။
အခန်းအမှတ်(၁၂-၉/၁၀)၊ (၁၂)လွှာ၊ Junction City Tower၊ အမှတ်(၃/က)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် (၂၇)လမ်းကြား၊ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ဖုန်း(+၉၅၁) ၉၂၅၃၃၄၃၊ ၉၂၅၃၃၄၄၊ ၉၂၅၃၃၄၅
(+၉၅၁) ၉၂၅၃၃၄၁၊ ၉၂၅၃၃၄၂